Ukubulala amagciwane & inzalo Factory | I-China Abakhiqizi Bokubulala Amagciwane Nenzalo
I-SGL Series Steam Sterilizer
Njengesikhungo sodwa se-R & D kuzwelonke semishini yokubulala amagciwane kanye nokuvala inzalo, i-SHINVA iyona yunithi yokuqala yokubhala yezinga likazwelonke nezezimboni lemishini yokuhlanza. Manje i-SHINVA iyisisekelo sokukhiqiza esikhulu kunazo zonke semishini yokuhlanza nokubulala amagciwane emhlabeni. I-SHINVA isidlulisile isitifiketi sohlelo lwekhwalithi ye-ISO9001, i-CE, i-ASME kanye nohlelo lokuphathwa kwengcindezi
SGL uchungechunge jikelele umusi sterilizer uhlangabezana ngokugcwele nezidingo ze-GMP ejwayelekile futhi usetshenziselwa kabanzi inzalo yamathuluzi, izingubo eziyinyumba, izitobha zenjoloba, amakepisi e-aluminium, izinto zokusetshenziswa, izihlungi namasiko aphakathi nendawo kwezobunjiniyela bemithi, ukunakekelwa kwezokwelapha nezempilo, isilwane ilabhoratri njalonjalo.
YQG Series zemithi Washer
Ama-washers we-GMP akhiqizwa yi-SHINVA ngokusho kwe-GMP yakamuva futhi angageza ngaphambi, awashe, ahlanze futhi omise imikhiqizo. Inqubo yokuwasha iyaphindeka futhi iyaqoshwa, ngaleyo ndlela ikwazi ukuxazulula ngokuphelele ikhwalithi engazinzile yenqubo yokuwasha ngesandla. Lawa ma-washer ochungechunge ahlangabezana nezidingo ze-FDA ne-EU.
I-GD Series Sterilizer Yokushisa Okomile
Isishisa sokushisa esomile sisetshenziselwa ukuvimbela inzalo yezinto zokushisa eziphakeme kakhulu. Isebenzisa ukujikeleza komoya oshisayo njengezindaba ezisebenzayo zokuvala inzalo kanye ne-depyrogenation futhi ihlangabezana nezidingo ze-Chinese GMP, EU GMP ne-FDA. Faka izindatshana ekamelweni, qala umjikelezo wokuvala inzalo, bese ujikelezisa ifeni, amapayipi wokushisa namavalvu omoya azosebenzisana ekushiseni ngokushesha. Ngosizo lwe-fan ejikelezayo, umoya owomile oshisayo ugeleza ungene egumbini ngendlela ye-HEPA emelana nokushisa okuphezulu futhi yakha ukugeleza komoya okufanayo. Umswakama ebusweni bezindatshana ususwa ngumoya oshisayo owomile bese uyakhishwa egumbini. Lapho ukushisa kwegumbi kufinyelela inani elithile, i-valve yokukhipha iyavalwa. Umoya oshisayo owomile ujikeleza egumbini. Ngokungeniswa komoya okusha okungena ngezikhathi ezithile, ikamelo linengcindezi enhle. Ngemuva kokuphela kwesigaba sokuvala inzalo, umoya omusha noma i-valve yokufaka amanzi yokupholisa ivulekele ukupholisa. Lapho izinga lokushisa lehlela enanini elibekiwe, ama-valve azenzakalelayo ayavalwa, bese kunikezwa i-alamu elizwakalayo nelibonwayo lokukhombisa umnyango wokuvula.